Qarax ismiidaamin ah oo goor dhaw lala eegtay talyaha cusub ee Milatariga Fadaraalka – Idil News
Qarax ismiidaamin ah oo goor dhaw lala eegtay talyaha cusub ee Milatariga Fadaraalka
Qarax xooggan ayaa goor dhow ka dhacay meel ku dhow Xarunta Wasaaradda Gaashaandhigga, iyadoo gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay lagu weeraray kolonyo ciidan oo ay la socdeen Saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda.
Dad goobjoog ahaa ayaa sheegay in ay halkaa ku dhinteen ugu yaraan lix qof todoba kalena ku dhaawacmeen.
Taliyaha cusub ee Ciidamada xoogga dalka Jen. Maxamed Axmed Jimcaale Cirfiid ayaa ka bad baaday isku dayga dil, kaddib markii weerar ismiidaamin ah lagu qaaday kolonyo uu la socday.
Uuro iyo qiic ayaa laga arkayay goobta qaraxa ka dhacay oo ku dhoweyd xarunta Wasaaradda Gaashaandhigga.